19 Jehova wee gwa Mozis na Erọn, sị: 2 “Nke a bụ ụkpụrụ nke iwu Jehova nyere, sị: ‘Gwa ụmụ Izrel ka ha kpụtara gị nne ehi nke ahụ́ dị mma, nke na-acha ọbara ọbara, nke na-enweghịkwa ntụpọ ọ bụla,+ nke na-anyatụbeghịkwa yok ọ bụla.+ 3 Unu ga-enye ya Elieza onye nchụàjà, ọ ga-akpụrụkwa ya gaa ná mpụga ebe unu mara ụlọikwuu, a ga-egbukwa ya n’ihu ya. 4 Mgbe ahụ, Elieza onye nchụàjà ga-eji mkpịsị aka ya rụrụ ọbara ya ma fesa ọbara ya kpọmkwem n’ihu ụlọikwuu nzute ugboro asaa.+ 5 A ga-akpọkwa nne ehi ahụ ọkụ n’ihu ya. A ga-akpọ akpụkpọ ya na anụ ya na ọbara ya na nsị ya ọkụ.+ 6 Onye nchụàjà ga-ewere osisi sida+ na ahịhịa hisop+ na ákwà na-acha uhie uhie+ tụba n’ime ọkụ ahụ na-ere nne ehi ahụ. 7 Onye nchụàjà ga-eji mmiri sụọ uwe ya, saakwa ahụ́, e mesịa, ọ pụrụ ịbata n’ebe unu mara ụlọikwuu; ma onye nchụàjà ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 8 “‘Onye kpọrọ ya ọkụ ga-asa uwe ya mmiri,+ saakwa ahụ́, ọ ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 9 “‘Nwoke dị ọcha ga-ekporo ntụ+ nne ehi ahụ kposa ná mpụga ebe unu mara ụlọikwuu n’ebe dị ọcha; a ga-edebere ya nzukọ ụmụ Izrel maka mmiri ahụ e ji eme ka mmadụ dị ọcha.+ Ọ bụ àjà mmehie. 10 Onye kpokọtara ntụ nne ehi ahụ ga-asa uwe ya, ọ ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede.+ “‘Ọ ga-abụrụ ụmụ Izrel na onye mbịarambịa nke bi dị ka ọbịa n’etiti ha ụkpụrụ na-adịru mgbe a na-akaghị aka.+ 11 Onye ọ bụla nke metụrụ ozu mkpụrụ obi ọ bụla bụ́ mmadụ+ aka ga-abụkwa onye na-adịghị ọcha ruo ụbọchị asaa.+ 12 Onye ahụ ga-eji mmiri ahụ mee onwe ya ka ọ dị ọcha n’ụbọchị nke atọ,+ ọ ga-adịkwa ọcha n’ụbọchị nke asaa. Ma ọ bụrụ na o meghị onwe ya ka ọ dị ọcha n’ụbọchị nke atọ, ọ gaghị adị ọcha n’ụbọchị nke asaa. 13 Onye ọ bụla nke metụrụ ozu aka, ya bụ, mkpụrụ obi ọ bụla bụ́ mmadụ nke nwụrụ anwụ, bụ́ onye na-emeghịkwa onwe ya ka ọ dị ọcha, onye ahụ emerụwo ụlọikwuu+ Jehova, a ga-ebipụkwa mkpụrụ obi ahụ n’Izrel.+ Ebe ọ bụ na e fesaghị ya mmiri e ji eme ka mmadụ dị ọcha,+ ọ ka bụ onye na-adịghị ọcha. Adịghị ọcha ya ka dị n’ahụ́ ya.+ 14 “‘Nke a bụ iwu a ga-agbaso ma ọ bụrụ na mmadụ anwụọ n’ime ụlọikwuu: Onye ọ bụla nke batara n’ụlọikwuu ahụ na onye ọ bụla nke nọ n’ụlọikwuu ahụ, ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo ụbọchị asaa. 15 Arịa ọ bụla nke ghe oghe, nke a na-ekwuchighị ekwuchi,+ keekwa ya eriri, ga-abụ ihe na-adịghị ọcha. 16 Onye ọ bụla nke metụrụ onye e ji mma agha+ gbuo n’ọhịa aka ma ọ bụ ozu ma ọ bụ ọkpụkpụ+ mmadụ ma ọ bụ ili ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo ụbọchị asaa. 17 Ha ga-ekporo ụfọdụ n’ime ntụ àjà mmehie ahụ maka onye ahụ na-adịghị ọcha kponye n’ime efere ma wụnye ya mmiri e kutere n’iyi na-asọ asọ. 18 Mgbe ahụ, nwoke dị ọcha+ ga-ewere ahịhịa hisop,+ sụnye ya n’ime mmiri ahụ ma fesa ya n’ụlọikwuu ahụ nakwa n’arịa niile ahụ na mkpụrụ obi ndị nọ n’ebe ahụ, fesakwa ya onye ahụ metụrụ ọkpụkpụ ma ọ bụ onye e gburu egbu ma ọ bụ ozu ma ọ bụ ili aka. 19 Onye ahụ dị ọcha ga-efesa ya n’ahụ́ onye ahụ na-adịghị ọcha n’ụbọchị nke atọ nakwa n’ụbọchị nke asaa, sachapụ ya mmehie ya n’ụbọchị nke asaa;+ ọ ga-eji mmiri sụọ uwe ya, saakwa ahụ́, ọ ga-adịkwa ọcha ná mgbede. 20 “‘Ma onye na-adịghị ọcha, nke na-emeghịkwa onwe ya ka ọ dị ọcha, a ga-ebipụ+ mkpụrụ obi ahụ n’etiti ọgbakọ unu, n’ihi na ọ bụ ebe nsọ Jehova ka o merụrụ. E fesaghị ya mmiri e ji eme ka mmadụ dị ọcha. Ọ dịghị ọcha. 21 “‘Ọ ga-abụrụ ha ụkpụrụ na-adịru mgbe a na-akaghị aka, na onye na-efesa mmadụ mmiri e ji eme ka mmadụ dị ọcha ga-asa uwe ya,+ tinyere onye metụrụ mmiri ahụ e ji eme ka mmadụ dị ọcha aka. Ọ ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 22 Ihe ọ bụla onye na-adịghị ọcha metụrụ aka ga-abụ ihe na-adịghị ọcha,+ mkpụrụ obi nke metụrụ ihe ahụ aka ga-abụkwa onye na-adịghị ọcha ruo mgbede.’”+